Date My Pet » 6 Summer Date Ideas
Last nohavaozina: Oct. 25 2020 | 2 min namaky
Ataovy tamin'ity fahavaratra ity sizzle – amin 'ny ambony 6 daty hevitra noho izany vanim-potoana!
1. Mandehana tongotra lavitra
Mialà any, ka jereo tanàna rehetra ireo no midika ianao hahita. Tsy vitan'ny no fikarohana voaporofo fa-tongotra lavitra kokoa ny fahasalamanao, izany koa dia ahafahantsika fotoana sy ny habaka mba tena hahafantatra ny daty. Arakaraka ny toerana mahaliana, ny tsy hafahafa mampangina ianao manana – toy ny zavatra Ho foana ny miresaka momba ny!
2. Hit ny fanaovana fanatanjahan-tena miaraka
Na ianao ny Fitness nafana fo tafahoatra, na vao manomboka avy, ny mandeha any amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena foana mahafinaritra kokoa amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena-Buddy. Ianao sy ny daty dia afaka hanao ny asan'ny tsirairay ny mpanazatra manokana, ary mamorona anao manokana baotin'i toby roa. Io no fomba tsara ny aingam-panahy salama fifaninanana eo aminao.
3. Mandehana any an-toerana ny hetsika ara-panatanjahantena
Mandehana any an-toerana ny lalao – miaraka. Mihoraka amin'ny ekipa amin'ny sombin-javatra mitovy rantsan-. Very ny tenanareo ao amin'ny rivotra ny vahoaka – sarotra tsy mba hiala voly rehefa manao ny onja! Raha toa ianao mahatsiaro ho be herim-po, dia afaka miezaka foana sy hahazo ny tantaram-pitiavana hafatra amin'ny Jumbotron.
4. Campout roa
Ataovy ny ankamaroan'ireo hariva fahavaratra. Misy mora, mahafinaritra (ary tanteraka tantaram-pitiavana) miandry daty marina eo amin'ny tokotany. Hanorina trano-lay, ary mankafy ny tantaram-pitiavana daty alina snuggling ambanin'ny lanitra feno kintana fahavaratra!
A nankany amin'ny Zoo dia azo antoka ny hitondra ny zanak'osy amin'ny aminareo amin'ny famoronana io daty hevitra! Miaraka maro ny mahita biby, dia afaka hanevaheva veloma misy hafahafa mampangina. Mitohy, mampiseho ny daty fa tena bibidia momba azy ireo ianao!
6. Berry maka
Summer no fotoana tsara indrindra mba hahazo ivelany sy haka ny ny voaroy, Ary manao tsara tarehy sy tsy manam-paharoa daty mahafinaritra hevitra koa. Dia tonga an-trano rehefa afaka izany, mba hiverina ireo voaroy ho hanitra tsindrin-tsakafo Fifaliana.